ဖြေဆေး – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
စိတ်ဟာ အင်မတန်ကို ဆန်းကြယ်လှပါတယ် သမထ ကိုထူထောင် နေတဲ့အချိန် မှာ စိတ်ကလေး ငြိမ်းချမ်းမှချမ်းသာမှ သမာဓိ ဖြစ်တာမို့ မိမိ၏ စိတ်ကလေးကို အလိုက်သင့် ဖြေဖြေလျော့လျော့ ဖော့ဖော့လေး ဘာဆို ဘာမှ မလိုချင် တဲ့ စိတ်ကလေးထားပြီးရှုမှတ်နေရင် သူ့ဖာသာ အလင်းတို့ နိမိတ် တို့ ဆိုတာ ရလာ တာပါ….sis ရေ..ဒါပေမယ့် လေ စိတ်ပူ မိတာ က အလင်းနိမိတ် မရ လို့ ဘုရား တွေ မဖူးရမှာ အလွန် ပူနေတယ် အင်း ပေါ့။ အဲ့ဒါဟာ စိတ်ရဲ့ တကယ့် ကြီးမားတဲ့ block တံတိုင်းကြီးပါ sis. အဲ့စိတ်ဝင်နေသမျှ အလင်းလည်းရလာမှာမဟုတ်သလို တရားလည်း အရှေ့ မတက် ပါဘူး sisတ ကယ်တော့ နီပွန်ရေး ပေးထါးတဲ့ စာစုလေး တွေကို အနှစ်ချုပ် လိုက်ရင် စ ကားလုံး အတို ချုပ် တခုပဲ ရလာ ပါတယ်..အဲ့ဒါ လေးကတော့..ဘာမှ မလိုချင်တဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ အေးအေး ချမ်းချမ်း လေး မူလ ကမ္မဌာန်း အာရုံ လေး ပေါ်မှာပဲ ဝင်တာသိ ထွက်တာသိ သတိက လေး ကပ်ပြီး ရှု မှတ်သွားရင် လိုရာခရီး ရောက်နိုင်၏.. ဆိုတာပါပဲ..ထို့ကြောင့် ဤ သို့သော စိတ် ထားမျိုးလေးကို မထားနိုင်မချင်း တရားရဲ့အရသာကို ခံစားမိဖို့ အင်မ တန်ဝေးနေ ပါဦးမယ်..ရှင့် အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် တရား ရဲ့သဘော သဘာဝကိုက အင်မတန် နူးညံ့ နေလို့ပါပဲ..မိမိ တို့၏ စိတ် အစဥ်မှာ မည်သည့် emotion တခုခု ကြိုက်တာကို ဖြစ်လိုက်ပါ တရားနဲ့ အဝေးကြီးဆီကို ရောက်သွားပါပြီ..ဝမ်းသာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဝမ်း နည်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာ တခုခု ကို ဖြစ်လိုက် တာနဲ့..ဘာအလင်းမှလည်းမရသလို ဘာ နိမိတ်မှလည်း မရ သလို ဘာ တရားမှလည်း ရှေ့ဆက် တက်လို့ရမှာ မဟုတ်တော့်ပါဘူး…
ရှင့်ဒါမို့ အဓိက သော့ချက်က..မိမိရဲ့ စိတ်ကလေး ကို သာသာယာယာ ဖြေဖြေ ဖော့ဖော့ အတက် အကျ ထိမ်းညှိ နိုင်တဲ့ စိတ် ကလေး မျိုး ကိုသာ မွေး မြူ လိုက်ရင်…အရာ အားလုံး လွယ် ကူ မြန် ဆန် သွားရပါလိမ့်မယ် ရှင့်…အရေးကြီးဆုံးနဲ့ အရေးပါဆုံးက မိမိ၏စိတ်ကလေး ကိလေသာတွေ နဲ့ ကပ်ငြိ ခွင့် မရှိအောင် သတိ လေးနဲ့ ထိမ်း ကြောင်း ပေး နေ ခြင်း ပါပဲ..နေ့ ခင်း ပိုင်း အပတ်စဥ် များတွင် အားထုတ်လျှက် ရှိကြကုန်သော ယောဂီ များအတွက် ရေးပေးလိုက်ရပါ၏.. စာရေးသူ က အမေးအဖြေ အပိုင်းမှာ မနက် နှင့် နေ့လည် မှာ တာဝန် မယူထား ခြင်းကြောင့် အသံနှင့် ဖြေ ပေးလို့ မရတာကိုလည်း တောင်းပန်လိုက်ရပါတယ် ရှင့်..
မှတ်ချက်။ ။ တယောက်နဲ့ တယောက်ဟာ ပါရမီ ဓာတ်ခံ ခြင်းဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ကြပါဘူး.. တချို့ က အရင်ထဲက ကျင့်ထားလက်စ တွေ ရှိနေတက်ပါတယ်..ကျင့်တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဒီ တ ဘဝ တည်း လို့ ကွက်ပြီး မမြင် စေချင်ပါ ဘူးရှင့်..ဘဝါ ဘာဝတွေ မှာ ကျင့်ခဲ့ဖူးလို့ ဒီဘဝမှာ ခဏ လေး ပြန်ကျင့် လိုက်တာ နဲ့ ဟိုဘက် ဘဝ တွေက ဓာတ်ခံ သတ္တိ တွေဟာ ရေမြောင်း ဖောက်ပေး လိုက်သလို..ဟောခနဲ…ဆင်းလာသလိုပါပဲ…အသိတွေလျှင်လျှင်မြန်မြန်ရလာတက်ကြပါတယ်..တချို့က သမထ အရမ်း ထူးချွန် ကြပါ တယ်…တချို့က ဝိပဿနာ ပိုင်းမှာ အရမ်း ထူးချွန် ကြပါ တယ်..ဒါမို့ တယောက်နဲ့ တယောက် ဘယ်လိုမှ မတူ နိုင်ကြတာကြီးကို သူရသလို ငါ မရကောင်း လား ဆိုတဲ့ မိမိ ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး အားမလို အားမ ရဖြစ် တက်ကြတာဟာ အင်မတန် ကိုမှ အမှား အကြီးကြီးပါ..ဒီအရာလေးကို သတိထားပေးစေ ချင်ပါတယ် ရှင့်.. အဓိက အလင်းက စိတ်က လေး အရမ်းငြိမ်တဲ့အချိန် ရတာပါ..စိတ်ငြိမ်ဖို့သာ လေ့ကျင့်ရမှာပါ..ဘယ်လောက် ကြာချိန်ထိုင် မှ ဘယ်လောက် ဝါယူ ရမှ စသောစသော ကန့်သတ် ချက် သတ်မှတ် ချက်တွေဟာ လုံးဝ လုံးဝ ကို အဓိက မကျတာပါ…မိမိစိတ်ကလေး ငြိမ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အချိန် တနည်း ဘာ emotion မှ မဝင်နေတဲ့အချိန် ဖျတ်ဆို.. ရလာတာပါ..အလင်းမခိုင်တာလည်း.. စိတ် မှာ emotion တခုခု ဖြစ်သွား လို့ပါ..အလင်းပျောက်တာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ..ဒါမို့ စာရေးသူ အချိန် သိပ်မရသေး တာနဲ့ ဒီလို အတို​လေး ချုပ်ပြီး ရေးပေးလိုက်ရပါတယ် ရှင့်.။
အလင်း မရလို့ ဘုရား ဖူးမရ လို့ စိတ် ညစ်နေ သူ ယောဂီများ ကို..အားပေး စကားလေး ရေးပေး လိုက်ရပါတယ် ရှင့်..စာရေးသူရေးပေးထါးသောစာစုလေးများကို သေချာ သဘောပေါက်အောင် ပြန်ဖတ် စေချင်ပါ တယ် ရှင့်…စာရေး သူတုန်းက ဘာလို့ မှားခဲ့ တာပါ ဆိုတာကို သေသေချာချာ ရေးပေး ထါးတာ ပါရှင့်…စာရေး သူလို မဖြစ် ကြပါ စေနဲ့…လိုချင်နေသမျှ ဘာမှ ရလာမှာမဟုတ် ပါဘူး..လိုချင်နေတာ…လောဘ ကိလေသာ ဖြစ်နေလို့ပါ..အလင်း မရလို့ ဘုရာဖူး မရတာ လည်း မဟုတ် သလို အလင်း ရပြီး ဘုရားဖူး မရတာ တွေ လည်း ရှိနေ ပါတယ်..ဒါမို့ အဓိက စိတ် ကလေး ပါ ရှင့် သူ့ကို သာ ပိုင် အောင် နိုင်အောင် ကိုင် တွယ် တက်ပြီ ဆိုရင် ကမ္ဘာ တင်မ က စကြ်ာ ဝဠာ ကြီးတခု လုံးတောင် ပတ်လို့ ရပါ တယ်ရှင့်…စိတ် သည်သာ အရာရာ ဦးဆောင် သူ ကြီးပါ… စာရေးသူကိုယ့် စိတ်အကြောင်းကောင်းကောင်း သိလိုက်ရတဲ့နေ့ထဲ ကအတော် ကို ပျော်နေရတာပါ.. ..နောက်နေ့တွေကျ ရင်စိတ်နဲ့ တယောက်နဲ့တယောက် ဆက်သွယ်လို့ ရ ပုံလေး လေ့ကျင့်နေတာ ကိုယ်တွေ့ရေးပေးပါဦးမည်ရှင့် နေ့ခင်းအတန်းများအတွက် ရည်ရွယ် ၍ ရေးပေးလိုက်ရပါတယ် ရှင့်..
ကျနော် တခု လောက် မသိ တာလေး မေးချင် လို့ပါ ခင်ဗျာ သမာဓိ ထူထောင် တာ အားနည်း နေ တယ် ထင်တယ် အလင်းနိမိတ်က ပေါ်သလိုလို မပေါ်သလိုလိုနဲ့ ဘုရားတခါးမှ မဖူးရ သေးပါ ဘူး ခင်ဗျာ ဘယ်လို သမာဓိ အားကောင်း အောင်လုပ်ပြီး အလင်း နိမိတ် ပေါ်အောင် ကြိုးစားအား ထုတ်ရမလဲ မသိဘူး ဖြစ်နေပါတယ် အတွေ့အကြုံလေး ရှိရင် လမ်းညွှန်ပြပေးပါဦးနော် ကျေးဇူး ပါ ခင်ဗျာ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပါစေ စိတ်ကလေး ကို တည်ငြိမ်အေး ချမ်းအောင် ထား ခြင်း က သမာဓိ အမြန် ဆုံး တက် ခြင်းပါ ပဲ ရှင့်. အလင်း ရှိရှိ မ ရှိရှိ နိမိတ်ရှိရှိမရှိရှိ စိတ်နဲ့ အာရုံ ပြုပြီး ဖူး ကြည့်ပါ ရှင့်. အာရုံပြုနေတဲ့ အချိန်မှာ သမာဓိ တက်လာပြီး ဖူးလို့ရပါတယ် ရှင့်. အဲ့လိုမှမရ ရင် ဝါယူဝါမှတ် ပဲ ပြန်မှတ်နေပါရှင့်..
အမရေ မဂ်လာပါ ရှင့် ညီမက အခုမှ စထိုင်တာပါရှင့် အရံဟံလည်း မှတ်လို့မရ မေတ္တာကမဌာန်း ပွားတာ လည်း ကြာကြာ မရလို့ နားနား ပြီးလုပ် တယ် ဒါပေ မယ့် မရဘူးရှင့် လူက ရူးချင် သလို တောင်ဖြစ်လာလို့ နားလိုက်တယ်ရှင့် သူများတွေ လိုတောင်တရားတက်ပါ့မလားမသိဘူး စိတ်ပူ လို့ပါရှင့်..မရူး ရအောင် စိတ်ကလေး ကို လျော့ချ လိုက်ပါ sisရေ ..အရူး ပျောက်ချင်လို့ တရား အားထုတ် တယ်လို့သဘောထားပါရှင့် အစမို့ဖြစ်တာ ပါ sis. ဖြေးဖြေးချင်း အသားကျ သွားပါ လိမ့်မယ် ရှင့်. မရတာကို ဇွတ်မလုပ်ပါနဲ့ ရှင့်ကိုယ် အဆင်ပြေမယ့် ကမ္မဌာန်း အာရုံတခုခုကို သာ ပွားနေပါ sisရေ.စိတ်ပူ ပန်နေတာတွေ အဖြစ် မခံပါနဲ့ရှင့် မှတ်တာ ငြီးငွေ့သွား ရင် တရားနာပါ တရားစာဖတ်ပါရှင့်..အာရုံတွေနောက် မလိုက်မိပါစေနဲ့ ရှင့်..ဘယ်အရာကိုမှ မမျှော်လင့်တဲ့ စိတ် ကလေးနဲ့ ရှုမှတ်ပါရှင့် …တချို့ ယောဂီ များမေးထားသည်များကိုတော့ အချိန် မရသေးလို့…ခု အချိန်ရသလောက် လေး ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် ရှင့်..ယောဂီအသစ် စက်စက်များအတွက် ရည် ရွယ်၍ ဖြေပေးလိုက်ရပါသည်။မေးစရာလေးများရှိနေသေးပါလျှင် cb မှာ စာချန်ပေးထါးခဲ့ပါဦး ရှင့်.. စာရေးသူရေးပေးထါးတဲ့စာလေးတွေကိုလည်း သေချာသဘောပေါက်အောင် ဖတ်ပေး ကြဖို့ မမေ့ကြ ပါနဲ့ နော် ရှင့် အရှေ့က ယောဂီ များ၏ ဖြတ်သန်း ပြီးသွား သော အတွေ့အကြုံ နှင့် အမေးအဖြေ လေးများဖြစ်တာကြောင့် သေချာဖတ်ကြည့်ရင် အဖြေရှိနေပါ တယ် ရှင့်..သေချာလေးတော့ သတိ ထားဖတ်ပေးဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့ရှင့် ဘယ်ဟာဖတ်ရမယ် မသိရင် cb မှာ စာပို့ပေးပါရှင့် link ချ ပေးပါ့မယ် ရှင့်…။
တခါ တလေ မေးခွန်တွေ အားလုံး နီးပါးက တူနေကြ တာပါရှင့်…စိတ်ထွက်တယ် စိတ် မငြိမ်ဘူး အလင်း မရဘူး နိမိတ် မရဘူး ဘုရားဖူးမရဘူး အလင်းက မငြိမ်ဘူး နံရံပို့ လို့မရဘူး ဗုဒ္ဓါနဿတိ ပွားမရဘူး ပုံတော် က ရွေ့နေတယ် အလင်းက ပေါ်လိုက် ပျောက်လို က်ဖြစ်နေ တယ်တရား ထိုင် ရင် နာတာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသမာဓိကဘယ်လိုလုပ်ရင်မြန်မြန်တက်တာလဲ..စသော စသော မေးခွန်းများကို တပေါင်းတည်း ဖြေပေးထါးတဲ့ link လေးထဲ မှာ စာရေးသူ အကုန် ရေးပေးထါး ပါတယ် ရှင့်…ဘာကြောင့် ဒလိုတွေဖြစ်တာပါဆိုတာ…ခုတော့ အချိန် မရသေးလို့ တချို့ မေးခွန်း တွေ( ၃)မှာ ရေးပေးပါဦးမယ်ရှင့် .အားလုံးအတိုချုပ်နဲ့ အလွယ်ကူဆုံးအဖြေ လေးတခုတော့ရှိပါ တယ်..အဲ့ဒါကတော့…ဘာမှမလိုချင်မရချင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်ကြီးကို ဝါယူဝါမှတ် သန့်သန့်လေးတွေနဲ့ ပူဇော်ပါမယ်…ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးကို မွေးမြူပြီး တရားအားထုတ်ရင်အပေါ် ကမေးခွန်းတွေအားလုံးဟာ အဆင်ပြေသွား ပါလိမ့်မယ်ရှင့်…သို့သော် လည်း…မေးနေဦး မှာပါပဲ ရှင့် ..ဘာလို့ဆိုတော့….လိုချင်ကြတာကိုးနော့ စာရေးသူလည်း လိုချင်မိခဲ့လို့ block အကြီး ကြီး ခံခဲ့ပြီး လုပ်သလောက် အရှေ့မရောက်ခဲ့တာပါ..ဒါမို့ စာရေးသူလို မဖြစ်စေချင်လို့ ခုလို စိတ် မျိုးမမွေးထားကြပါနဲ့ရှင့်လို့ သတိပေး မျှဝေပေးရတာပါရှင့်…
မေးခွန်း လေး မေးပါရ စေရှ င်။ တရား တခါ မှ မထိုင် ဘူးတဲ့ သူ အတွက် စတင် လေ့လာ ရမယ့် အခြေခံနည်းလေး သိချင်ပါတယ်ရှင် ပီးတော့ လေ ကြောက်တတ် လွန်းတာ ဘာကြောင့် ပါလဲရှင် ( မျက်လုံး မှိတ်ပီး ဘုရား စာရွတ်တာ မျိုး တယောက် တည်း ဆိုတဲ့ အသိ တယောက် ယောက်ရောက်လာ ပီဆိုပီးကြောက် တတ်တာ ဘာလို့ပါလဲ ရှင်တရားမရနို င်သူမျိုးမို့လားရှင် )နည်းစနစ်တကျနဲ့ တရားထိုင်ဖို့ လမ်းညွှန် ပြသပေးနေတဲ့ နေရာတခုခုကနေ ဆရာ တယောက် ယောက်ကို ဆက်သွယ်ပြီး စတင်ရှုမှတ်ပွားများလို့ရပါတယ် ရှင့်…အတွေးကြောင့် ကြောက်တာ ပါ sisတရားမရနိုင်တဲ့သူ ၅ မျိုးထဲ မပါရင် အကုန်ရနိုင်ပါတယ် sisအတွေးဟာအရာအားလုံးရဲ့ အစပါ sis တွေးမိလို့သာ ဆက်ခါဆက်ခါတွေးနေလို့သာ ကြောက်စိတ်တို့ ချစ်စိတ်တို့ စသဖြင့် ဝင်ရောက်လာတာပါ sis ရေ .. ကြောက်အောင် တွေး နေလို့ပါ sis..တွေးကြော မရှည် အောင် သတိလေးနဲ့ကြည့်ပေးပြီး ဖြစ်ပြီးသားတွေ.. ပေါ်ပြီးသားတွေ ကို ပြန်ပြန်မတွေးပါနဲ့ sis…….. ကျနော်ပြောချင်တာကလေ လက်တွေနဲ့မမှတ်တော့ပဲ နှာသီးဖျားမှာ ပဲမှတ်ရင်ရောရ လားခင်ဗျာ ဝါရေဝါမှတ်ကနေ အာနာပါနဝင်လေ ထွက်လေကိုပြောင်း မှတ်ရင်ရောရလား ခင်ဗျာ သတိအား ကောင်းနေပြီဆို လက်မပါဘဲ မှတ်လဲ ရပါတယ်ရှင့် လက်ချိုးခိုင်းရတာ က သတိ တအားလွတ် တဲ့သူမျိုးတွေ အတွက် နေစရာ အာရုံ လေး တခု ပေးလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ…ရှင့်…………….
မမရှင့်ဝါယူဝါမှတ် 120 လောက်ရတော့ အရမ်းတောင့်တာကိုခံစားရပါတယ် တောင့်တင်းတာ ကမခံနိုင်အောင်ကိုဖြစ်နေလို့အဲ့နေရာပဲစိတ်ကရောက်နေပါတယ် နှာသီးဝကဝင်လေ ထွက်လေ ကိုမှတ်လိုမရပဲအဲ့နေရာကိုရောက်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိချင်လို့ပါရှင့် တရားကို တနေ့ ၄ကြိမ်ထိုင်ရင် ထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုယ်စောင့်တရား၄ပါးကပွားရမှာလားရှင့် တရား ထိုင်တိုင်း ကိုယ်စောင့် ကမ္မဌာန်း (၄ ) ပါးကို တမျိုးကို ၅ မိနစ် လောက်အရင် ပွားရပါ မယ် sis..မမရေဝါယူဝါမှတ်တာမျက်စိရှေ့မှာနေရောင်ကြည့်ပြီးရင်ပြန်မှိတ်လိုက်ရင်မြင်ရသလို အလင်းလေးတွေ မြင်နေတာ ပျောက်လိုက် ပေါ်လိုက် ဖြစ်နေတာ ၂ရက်လောက် တော့ရှိ ပါပြီ ဒီနေ့တော့ မျက်စိမှိတ်ပြီးမှတ်နေတာ အလင်းရောင် ကအရမ်းမတောက်ပဲ ဘယ်လိုပြောရ မလဲ ပြင်လိုက်ကြီးလိုအပြည့်မြင်နေပါတယ် ပြီးတော့မျက်စိလိုအဝိုင်းအကြီး ကြီးနှာခေါင်းနား မှာ ပေါ်လာပါတယ် ။
မျက်စိ အုတ်တာ မလုံလို့ လားထင်ပြီးဖွင့် ကြည့်လိုက်ပါ တယ်မမရေ ဝါယူဝါ မှတ်မှတ် နေရင်း မျက်လုံးမှာလင်းပါတယ် အရမ်းတောက်ပမနေပေမယ့်လင်းပါတယ်ဒီနေ့ထိုင်တော့ မျက်လုံးနှစ် ဖက်လုံးမှာအလင်းပြင်ကြီးဖြစ်နေသလိုပါပဲ စိတ်ကအဲ့ရောက် သွားတာသိတာနဲ့ ဝါယူဝါမှတ်ပါ တယ်ဒါပေမယ့်သတိထားလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာအဲ့အလင်းပြင်ကလင်းနေပေမယ့်မှောင်နေသလိုဒါပေမယ့်မမှောင်ဘူး အဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ် ရမလဲဟင်လင်းတယ်လို့ သိနေပေမယ့်မဲနေတယ် အဲ့မဲနေ တာကိုကြည့်လိုက်ရင် ဝေးသလို နီးသလို ဖြစ်နေ တယ်ဘယ်လို မှတ်ရမလဲဟင် သိလိုက် တာနဲ့ ဝါယူဝါ မှတ်လုပ် ပေမယ့်မှတ်နေ ရင်းနဲ့ မျက်လုံးမှာ ပေါ်လာပြန်ရော ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဟင် စိတ်လေး ကတော့ အရမ်း အေးချမ်း နေတယ်မမရယ် မှတ်နေတဲ့အချိန် သတိလေး ကပ် ကပ် ပေးပါ sisအလင်းနိမိတ် ရနေပါပြီ နိမိတ်ကို အာရုံမစိုက်ပါနဲ့ ဦးမခိုင်သေးရင် ပျောက် တက်ပါ တယ်အလင်းကို လိုက်မကြည့်ပါနဲ့ sisနိမိတ်က မခိုင်သေးလို့ပါ. ဝါယူဘဲ မှတ်နေပါ sis .ဝါယူဝါမှတ် ၅၀ လောက်မှာ ဘုရားဖူးသင်ခန်းစာအတွက် စိတ်ညွှတ်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ချာချာလည်အောင် နာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်း အရှိန်မြန်မြန်လှည့်နေသလို ခံစားရပြီး နှ လုံးခုန်အရမ်းမြန်လာပါတယ်…ဘယ်လိုဆက်ပြီးကြိုးစားရမလဲရှင့်….သတိလေးပြန်ကပ်ပြီး ပြန်မှတ်ပေးပါရှင့်..ယောဂီ အားလုံးတရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်